Ilizwe/indawo yokuhlala elwandle (igumbi laseRose)
Waikuku Beach, Canterbury, New Zealand
Igumbi lakho lokulala e indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguKeith & Jan
UKeith & Jan yi-Superhost
Igumbi elikhulu, labucala, eline-ensuite enemibono yegadi. Igumbi laseRose linegumbi elahlukileyo kunye neseti yeebhanka. UBUYENI ABANGAPHAMBILI ABADALA ABABINI NABANTWANA ABATHATHU abangaphantsi kweshumi elinesibini. Abantwana abangaphantsi kweshumi elinesibini simahla babone ezinye izinto ekufuneka uziphawule ngezantsi.
Kwiindwendwe ezongezelelweyo sikwanawo namanye amagumbi akhoyo ngexabiso elongezelelweyo (jonga ezinye izintlu zethu).
Kukwakho negumbi lokuphumla, ikhitshi, indawo yokutyela, indawo yokuhlamba impahla kunye nespa.
Ikhaya lethu alirhangqwanga nje yimithi kunye nothotho 'lwamagumbi' egadi kodwa likwakufuphi nepaki encinci enebala lokudlala elincinane, ukuhamba ematyholweni kunye nohambo lwemizuzu eyi-15/20 kuphela lomlambo ukuya elunxwemeni. Kukho neengoma ezininzi zebhayisekile ezifikeleleka ngokulula. Abalobi bayakonwabela ulwandle kunye nomlambo apho unokubamba khona i-trout kunye nesalmon (ngexesha).
Kananjalo sinamagumbi amabini okulala afumanekayo kwi-BnB ngexabiso elongezelelweyo.
4.83 ·Izimvo eziyi-36
4.83 · Izimvo eziyi-36
Sikwindawo ezolileyo ekumgama olula wokuqhuba ukuya eChristchurch, eRangiora naseKaiapoi ngoluhlu lwabo lweevenkile kunye neeresityu. Ezinye zeendwendwe zethu ziye eHanmer Springs njengohambo losuku.
Sikwayiyo nayiphi na idrayivu elula ukuya kwiidiliya ezininzi ezifumana ibhaso kunye nemini / uhambo lokuhamba ngeentsuku kwabo baxabisa ihlathi lethu lemveli.
Umbuki zindwendwe ngu- Keith & Jan
Siyavuya ukwabelana nawe ngekhaya lethu kodwa sikholelwa ekuvumeleni iindwendwe zethu ukuba zibe ninzi kangangoko zifuna. Indawo yethu yokuhlala iphezulu kodwa siyafumaneka kwaye siyavuya ukwabelana ngolwazi lwethu lwendawo.